Fahaterahan' i Maria (fety kristiana) - Wikipedia
Fahaterahan' i Maria (fety kristiana)
Ny fahaterahan' i Maria, na fahaterahan' i Masina Maria, na fahaterahan' i Maria Virjiny dia manondro ny andro firavoravoana kristiana ankalazana ny nahaterahan' i Maria renin' i Jesoa.
The Birth of the Blessed Virgin Maryby Ny fahaterahan' i Maria Virjiny Voatahy, sary nataon' i Giotto, ao amin' ny Cappella degli Scrovegni, ao amin' ny tanànan' i Padua any Italy (manodidina ny taona 1305)
Tsy mirakitra ny nahaterahan’ i Maria ny kanônan’ ny Soratra Masina ankehitriny. Ny fitantarana fantatra voalohany indrindra momba ny nahaterahan’ i Maria dia hita ao amin’ ny Filazantsaran' i Jakoba (5:2), soratra apôkrifa tamin’ ny faramparan’ ny taonjato faharoa, niaraka tamin’ ny ray aman-dreniny antsoina hoe Masimbavy Ana sy Masindahy Joakima.
Raha ny amin' ny olo-masina, ny Fiangonana dia mankalaza ny datin' ny fahafatesan' izy ireo, miaraka amin' i Md Joany Batista sy Maria Virjiny izay olom-bitsy tsarovana ny daty nahaterahany. Ny anton' izany dia hita ao amin' ny iraka tokana nananan' ny tsirairay tamin' ny tantaran' ny famonjena, fa araka ny lovantsofina ihany koa dia satria izy ireo irery ihany no masina tamin' ny fahaterahany (ho an' i Maria dia jereo ny Fahatorontoronina tsy azon-keloka; i Jaona dia nohamasinina tao an-kibon' i Elizabeta araka ny ny fandikana tranainy ny Lioka 1:15 ).
Ny fanoloran-tena amin' ny tsy fananan-tsinin' i Maria amin' ity anaram-boninahitra marianina ity dia ankalazaina ao amin' ny kolontsaina maro manerana izao tontolo izao.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahaterahan%27_i_Maria_(fety_kristiana)&oldid=1042458"
Dernière modification le 25 Desambra 2021, à 10:35
Voaova farany tamin'ny 25 Desambra 2021 amin'ny 10:35 ity pejy ity.